जन्मे;को २४ घण्टा भित्र, शिशु किन रुनै पर्छ ? नरोए के हुन्छ… हेर्नु’होस —
जब बच्चा जन्मन्छ, यो संसारमा आउने बित्तिकै ऊ ठूलो स्वरमा रुन्छ। उसको यो रुवाई नै ऊ जन्मेको संकेत हो। तर कहिलेकाँही बच्चाहरु जन्म पछि रुने गर्दैनन्, जुन् कुरा सामान्य हो। तर के जन्म लिए पछि बच्चा रुनु आवश्यक छ? यस प्रश्नको उत्तर प्रायः सबै आमाबाबुलाई थाहा होला , तर के तपाईंलाई थाहा छ बच्चा जन्मेको २४ घण्टा भित्र पहिलो पटक रुनु किन महत्त्वपूर्ण छ? यो कुरा थाहा पाउँनुहोस् कि नवजात शिशुको लागि जन्म लिँदा रुनु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।जन्म लिएपछि बच्चा रुनु किन छ त आवश्यक?
बच्चा कति समय रुनु सामान्य हो त ?बच्चाहरूको लालनपालनमा यो जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एक दिनमा बच्चाहरू कति रुनुपर्छ वा कति रुनु सामान्य हुन्छ भन्ने कुरा एक आमालाई थाहा हुनुपर्छ । धेरै अनुसन्धानहरूको अनुसार एक स्वस्थ बच्चाले एक दिन वा २४ घण्टामा कम्सेकम २-३ घण्टा रुनु जरूरी हुन्छ ।
२०७८ आश्विन १०, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 144 Views